HBO Zvino Discount Yevadzidzi (2020) - Maitiro Ekunyorera? - Sei
HBO Iye zvino ndiko kushambadzira sevhisi inowanikwa online. Iyo webhusaiti izere nezvakanyorwa kubva paTV sevhisi. Iyi sarudzo yakakurumbira nhasi yekutarisa mamwe mafirita anoratidza. Vechidiki mazuva ano vanogara vachitsvaga zvemukati zvitsva. 2020 ndiro gore rizere neakanakisa varaidzo. Wese munhu arikutsvaga zvitsva inoratidza uye mafirimu kutenderera . Kuramba wakanamatira pamba kunogona kuwana kunofinha pamusoro pemwedzi. Vadzidzi kunyanya vari kutsvaga mamwe madhiri makuru.
Iwe unogona kuongorora aya marongero uye uwane zvimwe zvinodhura zvemukati. Muchirongwa ichi, isu ticha tarisa iyo HBO Zvino mudzidzi kudzikisira kupihwa. Tichaedza kupindura mibvunzo yako yese maererano nebasa iri.
Ko HBO Iye Zvino Ine Dudziro Yevadzidzi?
HBO Iye zvino ndeyekutanga kushambadzira sevhisi. Ivo vane diki mushandisi base kana tichienzanisa neyekushambadzira hofori seNetflix.Iyo chikuva chaive chiri kupa mudzidzi kudzikisira kune vashandisi vayo. Izvozvi haisi kuwanikwa kuti ishandiswe kune vatsva vatsva.
Kupihwa kwakapera nguva yadarika. Vashandisi vatsva havagone kutora chikamu muchirongwa chekudzikisira mudzidzi.Icho chaive chirongwa chakakurumbira kusvika mwedzi mishoma yapfuura. Vashandisi vatove pane kunyorera vanogona kuramba vachiwana mabhenefiti. Mutengo wekunyorera unongova mashoma madhora mashoma.
Shanduko kuHBO Izvozvi?
HBO parizvino iri kuita chirongwa chekudzokorora. Ivo vari kuchinja zvachose nzira yatinogona kuyerera tichishandisa sevhisi yavo. Shanduko kuHBO Ikozvino dzakakosha. Iyo webhusaiti haisisiri inoshanda zvachose kune vashandisi vatsva. Unogona kusaina HBO pamhepo masevhisi kuburikidza neHBO Max. Iyo HBO Zvino chikuva chiri kuchinja zvishoma nezvishoma. Ikozvino yave kuwanikwa kune vashandisi mukati meUSA chete. Iyo HBO Iye zvino webhusaiti yave isingateereri zvakanyanya. Vashandisi havagone kugadzira account nyowani kana kusainira iwo masevhisi.
Matanho ekusainira HBO Zvino Yemahara Kuyedzwa:
Mudzidzi dhisikaundi inogona kunge yaenda, asi iwe uchiri kugona kusaina. Kune matani ezviratidzo ayo akakosha kutenderera. Izvo zvinoshamisa kuti uve neinternet kutenderera sevhisi yako yaunofarira TV show. Iwe unogona kudzoka chero nguva kuendesa chikamu chawakarasikirwa nacho. Isu tinovimba mutungamiriri wedu anokubatsira iwe zvakanyanya kushambadzira zvemukati zvemukati. Heano matanho aunogona kuteedzera kune akanakira mhedzisiro.
Kutanga nekunyorera kwako unofanirwa kushanyira iyo HBO Zvino webhusaiti. Unogona kutanga nekudzvanya pane iyi link - https://www.hbomax.com/ . Iyo peji reimba rinokuratidza akasiyana akasiyana anoshamisa mafirimu uye mafirimu aripo.Iwe unogona kudzvanya pakutanga kwebhatani rako rekuyedza remahara. Muedzo uripo kwemazuva manomwe evashandisi vatsva.
Kufanana nechero chero mupi wekushambadzira webasa, iwe unofanirwa kugadzira account yekushandisa. Vashandisi vanofanirwa kuisa mazita avo, email kero, uye vagadzire password. Unofanirwa kuona kuti password yakachengeteka uye yakagadzikana kuti ubatsirwe. Gamuchira mazwi uye mamiriro eHBO Max kuti ugadzire account yako.
Nhanho yekupedzisira mukuita ndeyekuwedzera ruzivo rwako rwekubhadhara. Vashandisi vanogona kuwedzera yavo kiredhiti kadhi kana PayPal.Ichakubatsira iwe kutanga iyo yemahara kuyedzwa. Vashandisi vanogona kunakidzwa nezvakanakira sevhisi kana ruzivo urwu ruripo. Nguva yemazuva manomwe ichatanga ipapo.
Zvinoshamisa! Iye zvino unogona kunakidzwa neruzivo rukuru rwekushambadzira kuburikidza neHBO Max.
Mutengo weHBO Mudzidzi Discount:
Mutengo weHBO Mudzidzi unodzikiswa iri $ 9.99 pamwedzi (pamwe nemitero). Iri ibasa rekutanga nemutengo wepamusoro wekunyorera. Vashandisi vanowana mukana nebhuku ravo revadzidzi. Mazuva ano haugone kuwana izvo zvekudzikisira neaccount nyowani. Mutengo unonzwisisika uchifunga nezve kunyoresa kunodhura. Kugara uchiita kunodhura zvakanyanya. Vashandisi vekare havana chekushushikana nacho neHBO Zvino. Zvirongwa zvavo zvichagara zvinoshanda kudzamara chimiro chemudzidzi chave chakasimba. HBO iri kugara ichiongorora zvitupa zvako kuti ive nechokwadi chekuti vadzidzi chete ndivo vanowana ichi chinopihwa.
Ndiani anogona kutora HBO Max mahara?
HBO yanga ichivandudza mazwi avo ekushandisa gore rino. Mhando nyowani nemasevhisi ari kuve anozivikanwa zvakanyanya pakati pevanhu.
Iyo HBO Max chikuva inovavarira kudzikisira iyo redundancies. Vanonyorera veHBO Zvino vanogona kutanga kushandisa iyo HBO Max sevhisi. Vezvenhau vari kumhanyisa ichi chigadziriso kubva Chivabvu 27. Vanhu vari kunyorera HBO neDTH yavo vanogona zvakare kuwana yavo Max masevhisi mahara.
Unogona kutarisa rondedzero yevanopa kubva kune yepamutemo webhusaiti. Huru kutenderera kweTV uye DTH masevhisi atove neHBO papuratifomu yavo. Vashandisi vanogona kusaina vachishandisa humbowo kuHBO Max chikuva.
Hechino chinongedzo - https://help.hbomax.com/Answer/Detail/2360 . Rondedzero izere yevanopa sevhisi inowanikwa pano.
Iyo HBO Max sevhisi inopa matani ezvimiro. Yekufambisa masevhisi ari kuve anofadza pakati pevanhu vazhinji. Izvo zvakakosha kuti ubude pachena kuti uwane vamwe vanyore. Izvo zvinowedzerawo kukosha pakutenga kwako. Ngatitarisei papuratifomu.
1. Tarisa zvese paHBO
HBO ndeyekutanga TV Studio. Izvo chete zvinowanika papuratifomu zvinonakidza. Tinokurudzira izvi kune vese vaverengi vedu. Ivo vane makuru anoratidza seMutambo weZigaro, Varindi, uye zvaburitswa zvichangoburwa seEuphoria Izvo chete pachikuva chikonzero chakakura chekudyara mukati.
Isu tanga tichienda kune varaidzo yepamhepo mu2020. Nzvimbo yacho ndeyekutenga kwakanaka kune ese ari kuenda nekuvaraidzwa kweTV screen.
Nzvimbo yekushambadzira inogona kutarisira mibairo yakanaka kana paine akanakisa mavambo.Iyo inokupa iwe yakawedzera kukurudzira yekushandisa sevhisi.Mazuva ano ese ekushambadzira sarudzo anokupa iwe muunganidzwa wepakutanga anoratidza. Inokurudzira vashandisi kutenga izvo zvekutanga.
HBO Max ine zvinyorwa zvitsva zvichitenderera munenge mwedzi wega wega.Ivo vanovimbisa zvinoshamisa zvinoshamisa zvitsva mukati ma2020.
3. Multiple vaoni
HBO Max ipuratifomu inonakidza inoita kuti iwe ugone kutenderera pane akawanda madhijitari. Iwe unogona zvakare kukopa zvinoratidzwa uye mafirimu anowanikwa pane foramu. Inokubatsira iwe kuchengetedza data uchitarisa uchienda. Vashandisi vanogona kuitamba pane avo mafoni, maTV, Mahwendefa, uye malaptop panguva imwe chete. Zvinoenderana nemapuratifomu auri kushandisa.
Izvi zvaive zvimwe zvezvinhu zvikuru izvo HBO Max iri kupa parizvino. Tinokurudzira kuti iwe uzvipfuure uye ufambire mberi.
Hapana kunyoreswa kutsva kweiyo HBO Iye zvino kudzikiswa kwevadzidzi kunowanikwa. Iwe unogona kusainira iyo HBO Max chikuva. Mutengo wavo unonzwisisika uye wakafanana neyakare foramu.Iwo masevhisi anowanikwa emadhora 14.99 pamwedzi. Icho chitsama chakaringana uye chinodzora zvaunoshandisa pakuona TV.
Iko kune, zvinosuruvarisa, hapana mudzidzi anoderedzwa anowanikwa kuHBO Max.Vashandisi vanogona kuona zvimwe zvepachena epuratifomu. Dzvanya apa - https://www.hbomax.com/watch-free .
HBO Iye zvino kudzikiswa kwevadzidzi hakuchina. Iyo puratifomu yese iri kuona yakakura revamp. Tinovimba mutungamiriri wedu anogona kupindura kusahadzika kwako kwese. Nakidzwa nenguva huru kuyerera zvemukati zvemukati.
Zvimwe Zvipo zvevadzidzi iwe zvaungade:
Inonzwika Student Discount
Amazon Prime Mudzidzi Discount
Yakanakisa Garageband Dzimwe nzira dzeApple
Maitiro Ekutarisa Twitch Chat Matanda?
isina kuvhurwa roblox link yechikoro
Android piritsi emulator ye windows 10
netflix isina kubatana neinternet
youtube tv mutengo uye chiteshi
nvidia geforce chiitiko chimwe chinhu chakakanganisika